AfricArXiv oo kooban - waxa aan qabano, guulahayaga iyo khariidadeena - AfricArXiv
Published by AfrikArXiv on 13th October 2020 13th October 2020
In ka badan labo sano oo aan la shaqeyneynay AfricArXiv waxaan ku faraxsanahay inaan soo bandhigno aragti guud oo ku saabsan shaqadeena. Waxaad ka heli kartaa faahfaahin dheeri ah iyo macluumaad
U xigso sida: Ahinon, JS, Ksibi, N., Havemann, J. al et. (2020, Sebtember 25). AfricArXiv - Bakhaarka Aqoon-yahanka Afrika ee Furan.
Sida saxiixayaasha Helsinki Initiative oo ku saabsan luuqadaha badan, ka Baaqa San Francisco ee ku saabsan Qiimaynta Daraasaadka (sfDORA), the Hindisaha Dib-u-eegista Degdegga ah ee C19 iyo Mabaadi'da Helitaanka Furan ee Afrika ee Wada Xiriirka Aqoonyahannada waxaan kobcineynaa kala duwanaanshaha luqadda, hufnaanta cilmi baarista iyo daahfurnaanta daabacaadda cilmiga Afrika.
Maxaan ugu baahanahay bakhaar aqoonyahan u leh Afrika?
Aragtida iyo himilada AfrikaArXiv waxaa ka mid ah kobcinta bulshada ka mid ah cilmi-baarayaasha Afrika, fududeynta iskaashiga u dhexeeya cilmi-baarayaasha Afrika iyo kuwa aan Afrikaanka ahayn, iyo kor u qaadista heerka cilmi-baarista Afrika ee heer caalami.
Waxaan ka dhigeynaa cilmi baarista Afrika mid caalami ah, taas oo kordhinaysa iskaashiga guud ahaan qaaradda iyo sidoo kale kicinta cilmi baaris isku dhafan Tan waxaa lagu gaaraa iskaashi lala yeesho ururro caan ah oo caan ah gudaha iyo dibedda Afrika ee ku takhasusay isgaarsiinta sayniska, kobcinta awoodda, horumarinta tiknoolajiyada cilmiga iyo isku xirnaanta - kuwaas oo dhammaantood u adeega helitaanka natiijooyinka cilmi baarista Afrika iyo guulaha iyo sidoo kale dhismaha sumcadda astaamaha cilmi-baarayaasha Afrika.
Guulihii aan gaadhay illaa iyo hadda
Bishii Abriil 2018, abuurka loogu talagalay AfrikaArXiv waxaa lagu beeray intii lagu gudajiray shirkii 2aad ee AfricaOSH ee Kumasi, Ghana iyadoo taariikhdan taariikhiga ah Tweet:
Baahida loo qabo in la helo bakhaar Afrikaan ah dhammaan macluumaadka iyo dadaallada sayniska furan #AfricaOSH pic.twitter.com/VNAemghv6e
- Joe (@JooGraced) April 14, 2018
Bishii Juun isla sannadkaas, waxaan ku biirnay xoogaggii Xarunta Sayniska Furan waxaanan bilownay a adeegga daabacaadda summadaysan. Horaantii 2020 waxaan fidinay barxadeena Furan Furan ilaa a beesha
aruurinta Zenodo lana bilaabay iskaashi lala yeesho ScienceOpen, oo aan la ordayno Meelaha loo yaqaan 'AfricArXiv' iyo daweynta ururinta COVID-19 cilmi baaris laga sameeyay oo ku saabsan Afrika.
In yar kadib intaas iyo sidii hal-abuurnimo iyo jawaab deg-deg ah ee aafada, waxaan iskaashi la yeelanay Kooxda Mustaqbalka Aqoonta si loo helo madal loogu talagalay qoraalada / muuqaalka hore ee PubPub. Marka xigta, waxaan qorsheyneynaa inaan ku darno Sawir-wadaag iyo PKP / OPS liiska keydka lammaanahayada.
Tan iyo markii aan ka shaqeyneyno inaan kobcinno bulshada ka mid ah cilmi baarayaasha Afrika, waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno codsi ku saabsan 2019 si aan u saxiixno Mabaadi'da Afrika ee Helitaanka Furan ee Isgaadhsiinta Aqoonta https://info.africarxiv.org/african-oa-principles/. Codsiga ayaa socda, markaa wali waad ku dari kartaa magacaaga. Lagu daabacay hoosta liisanka CC-BY, qof kastaa wuu wadaagi karaa oo la qabsan karaa mabaadi'da adoo siinaya deyn habboon 'Mabaadi'da Afrika ee Helitaanka Fudud ee Wada Xiriirka Aqoonta sida ay ku heshiiyeen saxiixayaasha', Bixi xiriiriye mabaadi'da, oo muuji haddii isbeddello la sameeyay.
Waxaan ku dhawaaqnay iskaashi istiraatiiji ah oo aan la yeelanno Machadka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Furan iyo Waxbarashada (IGDORE), Khariidad Aqooneed Furan iyo ScienceOpen. ORCID iyo AfricArXiv waxay bilaabeen dadaal wadajir ah oo ay ku waxay ka caawiyaan saynisyahannada Afrikaanka ah horumarinta shaqooyinkooda aqoonsiyo gaar ah.
Tan iyo bilowgii cudurkan faafa bishii Maarso, waxaan ururinaa, abuurnaa oo baahinnaa hanti badan ilaha, fikradaha iyo tilmaamaha ku saabsan COVID-19 ee Afrika.
Waxaan helnay oo aqbalnay qiyaastii 200 oo qoraal ah guud ahaan meelaha aan kuwada xirnay lamaanaheena.
Khariidadda Wadada 2021-2023
Iyada oo loo marayo dhismaha kaabayaal furfuran oo furfuran, hufan, la isku halleyn karo, hufan oo baahsan, waa ujeedkeenna inaan taageerno isku xirnaanta aqoonyahannada Afrika - iyo deeqda waxbarasho ee Afrika - oo loogu talagalay dhagaystayaal ballaaran. Iyada oo qayb ka ah qorshooyinka mustaqbalka dhow, waxaan ku tala jirnaa inaan sii ballaadhinno qalabka iyo codsiyada si looga wada shaqeeyo hal-abuurnimo, heerar caalami ah oo lagu dabakhi karo iyo habab si loo gaaro himiladeenna si loo hubiyo lahaanshaha Afrika ee xogta Afrika. Saddexda sano ee soo socota, waxaan dooneynaa inaan sii kordhino isku xirnaanta iyo dhismaha iskaashiga nidaamka deegaanka ee sii kordhaya ee Sayniska Furan iyo in la aasaaso AfricArXiv oo ah madal iskeed u martigalisay, iskudhaafka-qaaradaha-baahsanna u fidisay furitaanka barnaamijka Furan. Waxaan saadaalineynaa bakhaarada cilmiga ee kala duwan ee martigelinaya waxyaabaha Afrikaanka ah inay noqdaan kuwo la wada shaqeyn karo oo aan kala shaqeyno daneeyayaasha kala duwan yoolkaas Khariidadda wadada oo buuxda ayaa laga heli karaa africarxiv.org/roadmap.
Ku darso, taageer oo ka qaybgal
Dhisida iyo maaraynta AfricArXiv waxay ku lug leedahay kharashyada shaqaalaha, horumarinta tikniyoolajiyadda, adeegyada lamaanaha, adeegyada dhinac saddexaad sida martigelinta websaydhka, khidmadaha qalabka isgaarsiinta ee dijitaalka ah iwm. Laga soo bilaabo 2018 ilaa 2020, kharashyadan waxaa daboolay tabarucaad toos ah oo maaliyadeed inta badan xubnaha kooxda muhiimka ah, kaqeybgalka shirarka iyo dhaafitaanka khidmadda adeegga lamaanaha iyo shaqaale aad u heersare ah oo noocaas ah oo ay wada qabteen kooxda ballaaran ee afrika iyo adeegsatadu
Waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u ilaalin lahayn gudbinta la awoodi karo oo loogu talagalay cilmi-baarayaasha shakhsi ahaaneed waana tan sababta aan ugu baahan nahay taageero.
Dakhliyadayada qorshaysan waxaa ka mid ah iskaashiga hay'adaha, tabinta dadka, tababarka, adeegyada la talinta iyo kobcinta awooda
Ku darsiga dhaqaale ee AfricArXiv waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo PayPal, mPesa, debit toos ah, iyo wareejinta khadka tooska ah. Wixii faahfaahin ah, eeg https://info.africarxiv.org/contribute/.
Wax ku biirinta khadka tooska ah ayaa lagugu qori karaa https://opencollective.com/africarxiv adoo u marinaya kaarka amaahda ama u wareejinta bangiga: ku deeqaha aan qarsoodi ahayn sidoo kale waa suuragal.
Categories:	ogeysiisyadaFuran FuranWarbixinta
Tags: Baaritaan Afrikan ahXawaaladaha Dijitaalka ahmarin furansayniska furanRoadmap
AfricArXiv iyo bahwadaagta COS si ay u taageeraan cilmi baarista Afrika-AfricanArXiv	· 22nd Oktoobar 2020 markay tahay 8:51 pm
[…] Bishan, AfricArXiv waxay soo koobtay guulaha iyo qorshaha khariidadda sannadaha soo socda ee 1-3. Waad ku taageeri kartaa kuna dhisi kartaa dhanka sii jiritaankeeda adoo adeegsanaya […]
Leave a Reply in AfricArXiv iyo bahwadaagta COS si ay u taageeraan cilmi baarista Afrika-AfricanArXiv Cancel reply
Categories Select Category Ogeysiis (10) Awood dhisida (6) Wadashaqeyn (25) COVID-19 (31) Dhacdo (6) Guud (9) Qalabka (1) Aqoonta asaliga ah (2) Wareysi (8) Kala duwanaanta luqadda (7) Furan Furan (34) Sayniska Furan (16) Iskaashiga ku dhawaaqida (2) Dib-u-eegista asxaabta (6) Podcast (1) Diyaargarow (10) Daabacaadda (13) Warbixin (1) Isgaarsiinta Sayniska (17) Soo gudbinta (7)
Baaritaan Afrikan ah AI Sirdoonka Artificial BlackLivesMatter BlackVoicesMatter Xarunta Sayniska Furan chatbot Wadahadal AI Covid-19 Wadahadalka Xawaaladaha Dijitaalka ah Baadhista Soo saarista cilmi baarista Afrika Ururinta Joy Owango Luqado badan Jaamacadda Islaamiga ee Omdurman furan marin furan Wadaag furan Fur Khariidadaha Aqoonta furan dib u eegis kasta sayniska furan Qaab-dhismeedka Sayniska ee Furan OSF Dib-u-eegidda Aragga daabacaadda Dib u eegis daabacaadda PubPub dib u eegis deg deg ah Dib-u-dejinta Research Roadmap Isgaarsiinta Aqoonta Isgaarsiinta Sayniska ScienceOpen SDG2 Sudan Himilooyinka Horumarka Sare tcc-africa TCC Afrika tarjumaada Uganda Zero Hunger
Taageero ayaa loo baahan yahay dab ka dib maktabadaha UCT
Kadib dabkii ba'naa ee ka dhacay xarunta maktabadda ee Jaamacadda Cape Town (UCT) Abriil 18, 2021, Koonfur Afrika, waxaad hadda ku taageeri kartaa Mashruuca Badbaadinta Maktabadda Jagger adoo adeegsanaya tabarucaad maaliyadeed, Akhri wax dheeraad ah…
Xusuusta Florence Piron
Florence Piron waxay ahayd aqoonyahan ku takhasusay cilmiga anthropologist iyo anshax, waxay ka shaqeyn jirtay borofisar waaxda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee jaamacada Laval ee ku taal Quebec, Canada Iyada oo u ololeeye xoogan u ah Helitaanka Furan, waxay bartay fekerka muhiimka ah Akhri wax dheeraad ah…